Madaxweynaha Puntland oo safar shaqo ugu laabtay Imaaraadka. – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland oo safar shaqo ugu laabtay Imaaraadka.
Oktoobar 29, 2016 12:46 g 0
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta 29 October, 2016 safar shaqo ku aaday magaalada Abu Dubai ee xarunta dalka Isutagga Emaaraadka Carabta, safarka Madaxweynaha ayaa yimi kadib markii ay Dawladda Puntland casumaad rasmi ah ka heshay Dawladda Emaaraadka Carabta.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa safarkiisa ku weheliyay masuuliyiin ka tirsan golayaasha Dawladda Puntland iyo saraakiil kamid ah madaxtooyada Dawladda Puntland.
Safarka Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa salka ku haya qorshayaashiisa horumarineed ee ku aadan kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland isagoo magaalada Abu Dubai uga qayb geli doona shir ku saabsan arrimaha ganacsiga, kaabayaasha dhaqaalaha iyo siyasadda Soomaaliya iyo arrimaha geeska africa..
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku howlan ka mira dhalinta qorshaha xukuumaddiisa uga degsan horumarinta guud ahaan deegaanada Puntland, tayaynta kaabayaasha dhaqaalaha iyo wanaajinta xiriirka caalamiga ah ee ay Dawladda Puntland la leedahay beesha caalamka.
Ugu danbayn, Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa lagu wadaa in safarkiisa uu ku aaday dalka Isu Tagga Emaaraadka Carabta uu qaato mudo kooban oo dhowr maalmood ah kadibna uu dib ugu soo laaban doono caasimadda Dawladda Puntland ee magaalo madaxda Garoowe.
DHEGEYSO-Barnaamij Gaar ah furitaanka kalfadhigii 38aad ee barlamaanka Puntland.
DHEGEYSO-Khudbaddii Madaxweyne Gaas ka jeediyey furitaankii kalfadhiga barlamaanka.